Tababar Loo Qabtay Shaqaalaha Schoolada Quudinta Leh Ee Gobolka Qoraxey Iyo Doolo - Cakaara News
Tababar Loo Qabtay Shaqaalaha Schoolada Quudinta Leh Ee Gobolka Qoraxey Iyo Doolo
Qabridahar(Cakaaranews) Jumce 7da July 2017. Tababar loo qabtay shaqaalaha cuntada ee schoolada quudinta leh ee gobolada qoraxey iyo doolo islamarkaana ujeedadiisu ahayd sidii fahan buuxa looga siin lahaa nidaamka cunta karida iyo maamulkeeda ayaa ka qabsoomay magaalada qabridahar ee xarunta gobolka qoraxey.
Hadaba khabiirka fuliyaha kormeerka tayada waxbarashada Maxamed Rashiid oo kamid ah kooxda haysay tababarkan ayaa sheegay inuu ujeedada tababarkan yahay sidii shaqaalahan cuntada ee ka hawlgala schoolada quudinta leh ee gobolada qoraxey iyo doolo fahan buuxa looga siin lahaa qaabka loo maamulo cunta karinta dugsiyada quudinta leh. Wuxuuna intaa ku daray in sidoo kale labarayo sidii fayadhowrka cuntada guud ahaan loo hagaajin lahaa looguna Karin lahaa nidaam caafimaad qab leh. Wuxuuna khabiirku kula dardaarmay tababar qaatayaasha in ay tababarkan ka dhaqan galiyaan dhamaan schoolada ay ka kala yimaadeen.
Ugu danbayna waxaa dhankooda ka hadlay qaar kamid ah tababar qaatayaasha oo sheegay inay waxbadan ka faaiideen tababarkan islamarkaana ay si fiican ooga dhaqan galin doonaan goobaha ay kala yimaadeen.